Iidemokhrasi zijongana neLefty Fake News - Ezopolitiko
Iidemokhrasi zijongana neLefty Fake News
Ithunyelwe ngoFebruwari 6, 2017, 3:12 pm UMolly Riley / AFP / Getty Imifanekiso
Kunyaka ophelileyo, ngo-Matshi, iqela labavoti bakaBernie Sanders bachithe iintsuku zabasebenzi bebhanki besebenzisa iiselfowuni, bebongoza iphulo lokucela umngeni kwivoti kumazwe amane ngenxa yoqikelelo kumajelo eendaba ezentlalo malunga nokunganyanzelwa kokuvota.
NgoAprili, balatha iitweets ukusuka kumdlali weqonga uTim Robbins etyhola ubuqhophololo obuxhaphakileyo ngabavoti.
Ekupheleni kweprayimari, abaxhasi beSanders abanyanisekileyo kwiindibano zombuso babeza kuhlala kwiinkqubo zosuku kunye neefowuni zabo eziphakanyisiweyo, becofa ividiyo. Kwakukho ifilim-yonke into, ingqondo ekhohlakeleyo, utshilo uMat Berg, owayesakuba ngumncedisi kaSanders.
Kwiiveki ezimbini kumongameli kaDonald Trump, kwa ukukhanya okufanayo, i-paranoia, kunye nomsindo wokwenyani ovela kweyona nkqubela iphambili yeDemocratic Party iye yanceda ekuveliseni uphawu lwasekhohlo lwento ye-intanethi eyaziwa ngokuba ziindaba zobuxoki.
imibala yodonga egxininisayo yegumbi lokuhlala
Ukuba yaqala ngexesha lonyulo kunye neesayithi ze-ad ezilambileyo zengeniso kunye namaphulo olwazi lobuxoki ajoliswe kakhulu ku-Hillary Clinton, iindaba ezingeyonyani kwixesha le-Trump ziye zangena kwi-ecosystem ye-intanethi ye-intanethi ngendlela yezithuba zentsholongwane kwi-Medium, i-Reddit, i-Twitter, kunye ne-intanethi. I-Facebook - enenkqubela phambili ephakamisa iiakhawunti zemidiya yoluntu ezingaziwayo, amayelenqe angaqhelekanga, kunye nokubamba amabali angazibambiyo iinyani.
Kukho iimeko ezintsha mihla le. Izikrokro malunga nokufaka kwakhe unyulo kwakhona luka-2020. Iithiyori malunga nolawulo isicwangciso kubhukuqo-mbuso ngokuchasene ne-United States (epheleleyo nge Usuku Emva Ngomso umfanekiso wesiXeko saseNew York esingcwatywe likhephu). Amabali isekelwe kwiakhawunti engangqinwanga ye-Twitter enikezela ngeemfihlo kubasebenzi be-White House abakhohlakeleyo (elandelwa ngabantu abangaphezu kwama-650,000). Nditsho ithiyori malunga Iakhawunti ye-Twitter (i-disinformation yaseRashiya).
Ukususela kunyulo, i-website ye-debunking i-Snopes ibeke esweni uluhlu olukhulayo lwamanqaku eendaba ezingeyonyani ezijoliswe kwiinkululeko, ukudubula amabali malunga umthetho omtsha ukuhlawulisa abaqhankqalazi ngobunqolobi, isicwangciso sokuguqula i-USS Enterprise ibe yi- yekhasino edadayo , kunye nebango lokuba uSekela Mongameli uMike Pence wazibeka ngonyango lokuguqulwa kwe-gay.
Kutshanje udliwano-ndlebe nge I eAtlantiki , Umhleli oLawulayo we-Snopes u-Brooke Binkowski uchaze iindaba zobuxoki ezikhululekile njengezinto ezizalisekisa umnqweno - UTrump uza kubanjwa! - kunolwazi olungelulo oluyilelwe ukuba lube yintsholongwane.
UJim Manley, ingcali yeDemokhrasi kunye nowayesakuba ngumncedisi omkhulu kwiNkokeli eNcinci yeSeneti edla umhlala-phantsi, uHarry Reid, wayibeka ngenye indlela: Njengoko abantu baxhalabileyo malunga nelizwe, ngasekhohlo kukho ngakumbi nangakumbi umnwe oshwangushayo, ukuba intando.
Amajelo eendaba ezentlalo akhuthaza ezi ziqwengana ziyilwe, zingenamthombo, okanye zicofa-y kuba sele kukho abaphulaphuli, utshilo u-Angelo Carusone, umongameli weqela leMedia Matters. Ixesha elide, andifuni ukwenza indalo ehambelanayo apha apho ekhohlo lenza into enye.
izimvo ezincinci zegumbi leendwendwe
I-Panicky liberal memes ziye zavela kwi-intanethi kwiiveki zamva nje, njengeposti ye-Instagram malunga namandla kaSteve Bannon kwiBhunga leSizwe lezoKhuseleko ekwabelwana ngalo. isitayile sodumo kunye ne umdlali weqonga . Ezinye iitroli ziye zafumana impumelelo ekwenzeni iindaba ezingeyonyani ezijolise ngokukodwa ekukhohliseni abantu abalondolozayo .
Uhlalutyo lwe-MC chatel lufumene ukuba kwiinyanga ezintathu zokugqibela zonyulo, iindaba eziphezulu ze-20 zezopolitiko ezikhohlisayo zabona ukubandakanya ngakumbi kwi-Facebook kunamabali angama-20 aphezulu onyulo oluvela kwii-19 ezinkulu ezidibeneyo. Uvavanyo olwalandelayo lwatyhila ukuba uninzi lwabantu baseMelika abakhumbulayo ukubona izihloko zeendaba zonyulo olungeyonyani bakholelwa ukuba zichanekile.
Abasebenzi beDemokhrasi kunye nabasebenzi kumajelo eendaba axhomekeke ekhohlo baqikelela ukuba ithiyori yeyelenqe echasene noTrump ekugqibeleni iya kuphazamisa ingxelo yokwenyani malunga nolawulo, ijongela phantsi izizathu ezisemthethweni zomsindo ngasekhohlo kwinto eyenziwa ngabalawuli.
Okwangoku, okwangoku, yincoko ekhoyo phantse ngokupheleleyo ngaphandle kodidi lwezopolitiko ngokwalo. Amagosa anyuliweyo akathethi ngamabali angeyonyani njengenyani, njengeefowuni zikaTrump zokuphanda ubuqhophololo babavoti ngexesha lonyulo. Kodwa oko kususwa kubangela iingxaki zayo kwiinkokeli ezingenayo indlela ecacileyo yokuwachitha amabali obuxoki asasazwa ngokubanzi.
Ikho ngasekhohlo kwaye yingxaki leyo kuba ifundisa abantu gwenxa, utshilo uJudd Legum, umhleli oyintloko kwindawo yeendaba eziqhubekayo iThinkProgress. Oko kuyingozi ngezinye iindlela kuba ixesha olichitha uthetha ngaloo nto, unokulichitha uthetha ngezinye izinto.
Inegalelo kwimekobume ebanzi yokungathembani, kwaye inyusa isantya semeko yasemva kwexesha lethu, utshilo uTeddy Goff, umseki we-Precision Strategies kunye nowayesakuba ngumncedisi omkhulu kuBarack Obama kunye noHillary Clinton. Iindaba ezingeyonyani ziyonakalisa kakhulu nokuba zizuza bani kwezopolitiko. Akukho mntu ngasekhohlo kufuneka acinge ukuba kufanele ukuba siphinda-phinda iindaba zobuxoki ngasekunene.
UBerg, umsebenzi wakwaSanders, ukhumbule ezama ukuqiqa nabaphembeleli abasebenza nzima ngexesha lomsebenzi wakhe kwiphulo lokujongana nokufikelela kuvoto, abathunywa kunye nemicimbi yezomthetho. Kunzima ukwenza abantu babuze izinto kwaye baphande kwaye bafunde iphephandaba kunye nezinto, utshilo. Kuya kuba ngumngeni oza kunyuka ngakumbi nangakumbi kwintshukumo eqhubekayo.
UMark Longabaugh, umcebisi omkhulu wakwaSanders, uchaze abaxhasi abaza kuguqula inyani - abathunywa abangafanelekiyo abaxhasa uSanders kwindibano yesithili yaseNevada, umzekelo - kwiingcamango ezingeyonyani ebesiluphumelele unyulo esingakhange siluphumelele.
Kwakungcono ukungayinaki, uLongabaugh wongezelela.
Yingxaki enzima engenako ukusonjululwa ngamaqela ezopolitiko okanye imibutho esekwe kwicala lasekhohlo, utshilo uGoff. 'Ngokuqinisekileyo kuluxanduva kuye wonke umntu ukuba azame ukungabelani ngaloo nto kwaye athandabuze ngakumbi.'
Amandla e-intanethi nawo aphakamisa imibuzo malunga nobudlelwane beqela kunye nesiseko salo. Kwezi veki zidlulileyo, inkqubela phambili icinezele abenzi bomthetho ukuba bathathe amanyathelo aqatha ngakuTrump kwaye bazibandakanye nezigidi zabaqhankqalazi ababeqhankqalaze kwimpelaveki yokumiselwa.
itshokhwe ipeyinta imifanekiso yefenitshala
Ababini abakwizikhundla eziphezulu zeDemokhrasi eWashington, uChuck Schumer kwiSenethi kunye noNancy Pelosi kwiNdlu, bobabini babonise ukuvuleleka ekusebenzeni komthetho kunye noTrump. Kwiveki ephelileyo, uqhanqalazo yenziwe ngaphandle kwekhaya likaSchumer eBrooklyn. Kwaye phakathi kwabaphembeleli abaqhubela phambili kwi-Intanethi, uPelosi wadibana ne-vehement push-back emva kokuba ithe iqela linoxanduva kubantu baseMelika lokufumana indawo yethu efanayo.
Abanyuliweyo beDemokhrasi babambekile bezabalaza ukugcina phambi komsindo isiseko esisivayo ngoku, utshilo uManley, owayengumcebisi kaReid. Iyavakala kakhulu.
Umbra's Triflora Ukuxhoma iWindows Window yokutyala ngaphakathi kwiHard Herb yaseGadini
ISebe lezeMfundo ngoku liphanda ngezikolo ezibotshelelwe kwisityholo sokwamkelwa kwabafundi kwiiKholeji
Iintsapho zakwamanye amazwe ezahlulwe kumda ekugqibeleni ziyadityaniswa, kodwa uninzi luyasokola ngokwezemali.
UScott Disick uvuselela amaKhaya aPhezulu aPhezulu kwi-E entsha! Umboniso wenyani, Flip It Like Disick
Ulikhetha njani iCandelo oza kulithanda ixesha elide
Indlu yabazalwana bePropathi ukusukela kwiXesha le-10, Isiqendu sesi-7 Sasibekwa nje kwiNtengiso nge $ 1M
Ijaji iyalele ukuba uMichael Cohen akhululwe entolongweni kwakhona kwaye wathi urhulumente uphindise ngencwadi yakhe kaTrump
Ubugqwirha bukaBette Davis-Intombi kaBette Davis Ithetha Ngonina
IGqwetha leNkundla ePhakamileyo ka-Obama lincedise ukuThatha i-DOMA kwaye liphelise ukuvalwa komtshato
Ungayikhetha njani iNkqubo yeMibala yeNdlu yakho
Iintyatyambo eziGqibeleleyo kunye neeGadi zokuhombisa- Iindawo eziNdawo eziMhle kakhulu
I-Herbalife Dives 12% emva kokuba uSenator ebiza uPhando
UHillary Clinton Uqeshe Abancedisi ababini ababesakuba kwiPhulo 'lokuchasa' iPAC
izimvo zekhabethe encinci yokuhlamba
peyinta iikhabhathi zasekhitshini umbala